Kedu ihe njikwa ọrụ McAfee? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Onye na-ahụ maka ọrụ Mcafee - otu esi edozi
Onye na-ahụ maka ọrụ Mcafee - otu esi edozi
Kedu ihe njikwa ọrụ McAfee?
MMS bụ Windows SCM jisiri ikeọrụ, na dị ka ndị dị otú ahụ, edepụtara na Windows SCM dị kaMcAfee Onye njikwa ọrụ(ọrụaha: mfemms). Naọrụonwe ya na-echebe site naMcAfeeAPI LockDown, nke na-echebe ya ka ọ ghara imechi ya ma ọ bụ nwee nkwarụ.Bọchị 2 2021
Ihe omimi McAfee a na ewetara gi site na thetop10sites.
Ngwaahịa McAfee Antivirus na-echekwa ndị ahịa site na malware kachasị ọhụrụ na egwu egwu dị n'ịntanetị. Ha na-enye ngwaahịa 3 antivirus - McAfee Total Protection maka ihe dị ka $ 45 kwa afọ, McAfee Internet Security maka $ 40 kwa afọ, na McAfee Antivirus Plus maka $ 45 kwa afọ. Ihe ngwugwu Antivirus Plus gụnyere ọtụtụ njirimara dịka ihichapụ faịlụ dijitalụ dị nro na-adịgide adịgide, na-ezere weebụsaịtị ndị dị ize ndụ, na-egbochi malware ịgbasa site na ngwaọrụ gị, ịwụnye ya na ngwaọrụ gị niile na enweghị ọnụ ahịa ọzọ, nchedo ohi maka ngwaọrụ mkpanaka gị, firewall na ngwaọrụ nchekwa weebụ. maka Mac.
ppt melite njikọ
McAfee Internet Security nwere ihe niile, gbakwunyere njikwa ụmụaka na igbochi ozi ịntanetị adị ize ndụ. Na McAfee Total Protection na-enye gị nchekwa nchekwa Internetntanetị zuru oke, na-echekwa faịlụ nzuzo gị kachasị na sọftụwia nzuzo na ịchekwa aha njirimara na okwuntughe gị niile na TrueKey App. Nchịkọta niile na-abịa site na ịkwụ ụgwọ azụmaahịa ụbọchị 30 na nkwado 24/7.
Ka anyị zụta ngwugwu Mcafee Antivirus Plus, ị ga-enweta njikọ wụnye ngwa ngwa maka ngwaọrụ gị ugbu a, mana emesia ị nwere ike ibudata McAffee n'efu na ngwaọrụ ndị ọzọ niile dịka mbadamba ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka. Ntinye na-ewe ihe dị ka nkeji 10 dabere na ọsọ ọsọ gị ma ịnwere ike ịme mmemme ahụ ozugbo site na ụzọ ntanetị gị. The nnyocha na-mfe n'ihi na onye ọrụ nke mere na ọbụna a novice nwere ike iji ya.
Ibe obibi nwere ngalaba 6 - Nje Virus na Spyware, Web na Nchedo Email, Nzuzo, Mmelite McAfee, Ndenye aha gị, na Ngwaọrụ. Site na Nchedo Spyware, ị nwere ike ịme nyocha ngwa ngwa, zuru ezu, ma ọ bụ omenala iji wepu nje ndị na-adịbeghị anya na PC gị. A ngwa ngwa Doppler ga i scanomi na-adịghị ike ebe nke PC gị na mkpokọta 10 nkeji.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ka igwu ala, ị nwere ike ịgba ọsọ zuru ezu, nke nwere ike weghara oge elekere oge ụfọdụ, mana ọ ga-elele ihe PC gị chọrọ maka malware. Omenala nyocha ahụ na-enyocha mpaghara kachasị dị gị mkpa. Oge nyocha na-abụkarị mgbe niile ma ọ gaghị atụ aro ka ịgbanyụọ ya, mana ị nwere ike ịhazi ụdị faịlụ na ọnọdụ PC ka ha wee nyochaa ha mgbe niile ka mmemme ahụ na-agba ọsọ, maka mkpa nchekwa gị na ị nwere ike ịhazi ụfọdụ faịlụ ahụ na folda ewepu na nyocha, nke anaghị akwado ya.
Nwere ike ịhazigharị ntọala firewall gị na ọrụ ya maka nchekwa weebụ na ozi ịntanetị. Iji Traffic Controller na Smart Advice ị nwere ike ikpebi mmemme ndị nwere ịntanetị ma ọ bụ hapụ McAffee ịchịkwa ya. Na Njikọ Internetntanetị, ị nwere ndepụta nke mmemme gị arụnyere ma nwee ike iji aka gị jikwaa ịbanye na andntanetị ma jiri NetGuard gbochie ha ịme njikọ dị ize ndụ.
Site na nchọpụta intrusion ị nwere ike ichebe PC gị site na ndị na-agba ọsọ na-erigbu ihe na-adịghị mma na sistemụ arụmọrụ gị ma ọ bụ mmemme ma ị nwere ike ịtọ ya na njikwa njikwa dị elu maka nchekwa. Site na nchebe data, McAffeAffe na-enye gị nnukwu atụmatụ ọzọ - Shredder. Shredder na-enye gị ohere ichedo nzuzo gị ma wepu faịlụ nwere ozi nkeonwe dị nhịahụ.
E debere 'Mmelite' iji melite McAffee gị ozugbo ọ bụla enwere ụdị ọhụụ. Ihe PC na netwọkụ na-enye gị ohere ịlele ntọala netwọkụ nke ụlọ gị, nke na-enye nyocha nke ngwaọrụ gị niile McAffee na-echebe. Ihe ọzọ dị mma bụ QuickClean - ị nwere ike ihichapụ PC gị faịlụ ndị na-enweghị isi nke na-ewe ebe nchekwa gị ma wepụta ọtụtụ ohere na ihe karịrị nkeji ole na ole.
Site na nyocha nyocha nke enweghị ike, ịnwere ike ịkwụsị, jikwaa, ma ọ bụ dozie windo na mmemme gị ka emelitere yana ụdị ndị kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na-adịghị ekpuchi na peeji nke enyemaka, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkwado ndị ahịa. Nwere ike ịrịọ oku ma ọ bụ zipu tiketi, mana ị ga-echere ruo ụbọchị 2 maka nkwado azụ ha.
Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwe nkata ozugbo na Nkwado Ndị Ahịa Intel Security na mberede. Ndị a bụ isi uru: • Anaghị emetụta arụmọrụ • Ezi spam iyo • Intuitive ọrụ interface • Ezi nkwado Otú ọ dị, e nwekwara ụfọdụ ọghọm: • Ọ dịghị mma na nhicha ugbua oria kọmputa • Oké ọnụ ahịa atụmatụ N'ozuzu, McAffee Antivirus ngwaahịa nwere ya niile You Ikwesiri idobe PC gị ma dịkwa ọcha. Lelee weebụsaịtị 10 kacha elu maka nyocha ndị ọzọ nke ngwaahịa antivirus.
alaeze ụwa ndakọrịta
Kedu ka m ga-esi gbanyụọ njikwa ọrụ McAfee?
Malite> Mmemme>McAfee> VirusScan njikwa.
Right-pịa Access Nchedo ma họrọ Njirimara.
HọrọGbochie ọrụ McAfeeka a kwụsị ya.
Mechie VirusScan njikwa.
Kedu ka m ga-esi gbanyụọ McAfee na Windows 10?
Olee otúgbanyụọ McAfeeEbe Nche
Pịa aka nri naMcAfeeakara ngosi na ala-nri akuku nke gá »‹WindowsNa desktọọpụ.
Họrọ Gbanwee ntọala> Nnyocha oge na-esite na menu.
Na Real-Time ịgụ isiokwu ọnọdụ window, pịaGbanyụọbọtịnụ.
Nwere ike ịkọwapụta mgbe ịchọrọ nyocha oge-ga-amalite.
Hey ụmụ okorobịa, a ga m enye gị ndu ọsọ ọsọ banyere otu m ga-esi kpochapụ ụlọ cafes ndị ahụ na-akpasu iwe, kọmputa gị n'ihe egwu, igbe ịdọ aka na ntị ịmara ndị m na-ekwu maka ha mgbe ị na-eji ngwanrọ ahụ dị ka nke a, dịkwa mma na nke ahụ bụ ọbụbụ ọnụ m ịdị adị mgbe ọ na-abịa na egwuregwu kọmputa ọ bụ otú ahụ manụ n'agbanyeghị ugboro ole ị jụrụ a ịdọ aka ná ntị ọ ka ga-gbapụta n'abalị ikpeazụ m zụtara a ọhụrụ egwuregwu na-egwu online na niile tabsme nke m egwuregwu, iji kpọbata gị na ihuenyo ahụ na-egbochi egwuregwu gị na ihe ọ bụla ọzọ ị na-eme ma ugbu a, ọ nweghị ụzọ isi tufuo igbe ịdọ aka ná ntị a na Mattcafe ọbụlagodi n'okpuru ntọala igodo na ozi ịdọ aka ná ntị.
Enwere obere igbe ebe a, nwee nwute na-ekwu na enweghị ozi ịdọ aka na ntị ga-egosi ma ọ bụrụ na firewall gbanyụrụ, ọbụlagodi na ị mere nke ahụ, ọ ka ga-egosi nke mere na amaghị m ihe kpatara ha ji nwee nke a na mbụ, ọ bụ ee agbanyeghị ya mere, anyị ga-enweta ngwanrọ a ka anyị chee na windo windo windo ugbu a enyere, ihe kpatara m ji kwụsị windo windo bụ n'ihi na ejikọrọ m na netwọkụ na ọtụtụ ndị na-ahụ maka ntanetị na-abanye na ya ka ị ghara ịchọ nchebe abụọ maka ịgba egwu. ị ga-emepe ọdụ ụgbọ mmiri na gị rawụta na windo firewall na nke ahụ bụ nanị ihe mgbu na ịnyịnya ibu ya mere anyị ga-enyere firewall ahụ aka mana anyị agaghị ekwe ka ọ mee m gosi gị ihe m bu n'uche, yabụ Anyị na-aga na-amalite, Ogwe njikwa na-ejighị n'aka System. Nke a bụ Windows 7 n'ụzọ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ Firewall Windows wee hụ ihuenyo a ebe a ma ọ bụrụ na ịmara na ị nwere ya mgbe ị dị ka m ma ị nweta ịdọ aka na ntị ndị a ma eleghị anya ọ ga-abụ na windo firewall agbanyụ, yabụ n’okpuru netwọk ekwentị ebe a ma kedu ka ị siri mara na ịnọ na netwọkụ. Naanị lelee obere akara ngosi dị n'okpuru ebe a, obere akara ngosi ịntanetị gị, ị ga-ahụ foto nke ụlọ nke pụtara na ị jikọtara na netwọk ụlọ ka anyị wee nwee ike ịme ya ka Windows Firewall wee gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ebe a.
Anyị chọrọ ịkwado nke a, dịkwa mma, enwekwara igbe ebe a na-ekwu na m ga-agwa mgbe Windows Firewall na-egbochi mmemme ọhụụ site na ọkwa maka ọkwa maka ịmịcha. Yabụ ọ bụrụ na anyị pịa OK ọ ga-arụ ọrụ. Iji mee nke a, anyị ga-aga na ntọala ndị dị elu, yabụ na anyị abịaghachila na windo Firewall Windows ebe a gaa na ntọala ndị dị elu ihuenyo a ga-apụta ọ dị mma anyị ga-achọ ịga n'elu ebe a Ihe anyị chọrọ ịga na njirimara ugbu a anyị nwere ọtụtụ profaịlụ ebe a ị nwere ngalaba nkeonwe na ọha na eze anyị chọrọ ịga nkeonwe n'ihi na nkeonwe bụ netwọkụ ụlọ gị, yabụ agbanyere ọnọdụ firewall, nke a na-atụ aro ịme nke a nginggbanwe ka ịpụ njikọ njikọ site na ndabara ka ọ bụrụ ma ọ bụrụ na nzọụkwụ a dị mkpa, dịka nzọụkwụ ọzọ dị oke mkpa, Njikọ Ntanetị Na-echekwa, nke anyị chọrọ ịhazi, ị ga-ahụ ihuenyo a ebe a ka m ga-agwa gị niile gosi njikọ dị iche iche nke firewall na-enyocha ugbu a, yabụ na anyị ga-achọ lelee ha niile Hamachi na Bluetooth ekwesighi m ịkọwa nke a, nke anyị ga-gbanyụọ bụ njikọ LAN maka gị, ọ nwere ike ịbụ njikọ Wi-Fi gị.
Amaghị m, mana anyị chọrọ iwepụ nhọrọ ndị a niile, ugbu a ọ bụrụ na anyị pịa OK ma tinye ntọala ndị a, firewall anaghị enyocha njikọ ndị a ugbu a, n'agbanyeghị na ọ ka na-arụ ọrụ. Laa azụ na ihuenyo a ebe a, ọ na - ekwu, oh hey, ị maara na ihe dị njọ na firewall, nke ahụ dị mma n'ihi na ọ naghị enyocha ihe ọ bụla ma nyochaa ihe niile na - eme, na agbanyeghị firewall na - emeri na agbanye mana ọ naghị eme ihe ọ bụla mgbe know mara ihe m na-ekwu, nke bụ ụdị ihe niile dị n'isiokwu a, yabụ ugbu a, McAfee kwesịrị ịkwụsị inye gị nsogbu na ọkwa nzuzu ma nwee olileanya na nke a dozie nsogbu gị N'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla nwere ezigbo ụbọchị
Onye njikwa ọrụ McAfee bụ ọrụ Windows?
Ihe nchebe onwe onye na-eme ka ha ghara inwe ike ịwakpo mwakpo malware na nchebe nchebe. MMS bụ ọrụ Windows SCM jikwaa, yana dị ka ndị a, edepụtara na Windows SCM dị ka McAfee Service Controller (aha ọrụ: mfemms). Ọrụ McAfee LockDown API na-echebe ọrụ ahụ, nke na-echebe ya ka ọ ghara imechi ma ọ bụ nwee nkwarụ.
Kedụ ka m ga-esi gbanyụọ ọrụ McAfee?
Gbanyụọ McAfee Framework Service site na ndekọ ndekọ Windows Pịa Malite, Gbaa, pịnye regedit wee pịa OK. Chọta na họrọ ndị na-esonụ isi: Na nri pane, abụọ-pịa Malite eriri na-agbanwe Uru data ka 4. Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa.
Etu esi egbu ọrụ McAfee site na iwu iwu?
I nwere ike ịnwale ihe ọzọ. jikọọ na igwe site na igbe ọzọ site na iji virusscan console, mepee vs njikwa, ngwaọrụ, console dịpụrụ adịpụ (m kwadoro igwe na otu lan) .. mgbe igwe njikwa na-abịa. dbl pịa ohere nchebe ma hụ ma ị nwere ike wepu ụzọ igbochi ịkwụsị ọrụ mcafee ịkwụsị ...
Kedu nke bụ njikwa njikwa ọrụ maka McAfee systemcore 15.4?
McAfee SystemCore 15.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, arụnyere na nsụgharị ọhụrụ nke ngwaahịa McAfee Endpoint Security, na-agbakwụnye ọrụ Windows ọhụrụ, McAfee Management Service. MMS na-anọchi Windows njikwa njikwa (SCM) dị ka njikwa njikwa ọrụ maka ọtụtụ ọrụ nchekwa 15.4 metụtara McAfee.